Isifo samathambo | Health Content
Kulapho ukwakhekha kwethambo kwehla ezingeni (ithambo libebuthakathaka futhi libebuhlungu).
Amathambo ababuthakathaka futhi abebuhlungu kangangoba angcina kubanezinkinga ezingajwayelekile noma ukuwa.
Iguli ezinesifo samathambo zisengozini enkulu yokuphuka kwamathambo ikakhulu inqulu(Hip),umgogodla kanye nesihlakala(wrist).
IZIMPAWU ZESIFO SAMATHAMBO
Ukulahlekelwa ukuphakama ngokuhamba kwesikhathi
Ukuphuka kwathambo okwenzeka kalula kungamelekanga.
Ukuhlolwa isibalo samaminerali esisethanjeni - (BMD) ukuqinisekisa ukubakhona kwesifo samathambo esigulini.
Ukuhlolwa kwe-BMD kuphephile futhi akubuhlungu
Lilinganisa ubukhulu bamathambo
Ukuhlolwa kwe-BMD kuzosiza ukutholwa kwesibalo sobuncane benani lethambo lisesesigabeni sokuqala okosiza ukuphephisa enkingeni yokuphuka esikhathini esizayo nokuthola ukuthi izinga lokulahleka kwamathambo losiza nodokotela wakho ekukukhetheleni ukwelashwa okufanele.
Ukuphuka kwamathambo,ikakhulukazi umgogodla noma inqulu(Hip) yinkinga enkulu kakhulu yesifo samathambo.
Ukuphuka kwenqulu ngokuvamile kubangelwa ukuwa futhi kungabangela ukukhubazeka.
Ukulawula Isifo sakho
Imithi yesifo samathambo ingaciphisa ukuphuka kwamathambo.
Gqugquzela impilo engcono yamathambo ngokusebenzisa ukudla okunomsoco wekalsiyamu amasaplimente ukuzivocavoca kanye nemithi enqunyiwe.